No Velocity – College, Articles, Qormo & resume, Talooyin Qoraalka
Sridevi Qormo, Biography, muuqaal, Qoyska, Movies Super-hit, Demise Sridevi’s evolution over the years. Toogteen Gautamji mar kale. Qormadani la qoray sano ka hor, dib u Sept 1994 laakiin waa sida runta ah ee maanta. Essay on Sridevi “Waxaan dareemayaa ugu faraxsanahay marka qof walba i soo waco xiddigtii tiro ka mid ah.” ('85) “I Uma maleynayo inaan ka gaadhay hogaanka.”…
Delhi waa mid ka mid ah afar magaalo weynta weyn ee Hindiya. Iyada oo tirada mar walba sii kordheysa ee shirkadaha IT, warshadaha, warshadaha iyo bangiyada, Delhi ayaa u soo muuqday mid ka mid ah xarumaha waxbarasho iyo shaqo waaweyn. University of Delhi waa caan ah oo dhan Hindiya for heerarka waxbarashada. Iyada oo imtixaanka guddiga agagaarka geeska, students from…
Maalinta AIDS-ka Adduunka – December 1, 2017 : Qormo, theme, dhigyo, Quotes, Messages, Sida loo dabaal, Speech World aids day is celebrated every year all over the world on 1st of December to raise the public awareness about AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome). AIDS is a pandemic disease caused due to the infection of Human Immunodeficiency…
Raadinta Sida loo qor Letter ah si editor muujinayo dhibaatooyinka jidadka iyo waddooyinka la kulma jaridda biyaha inta lagu guda jiro xilli monsoon ee? Halkan waxaan ku yihiin la Letter ah si editor ah oo ku saabsan dhibaatooyinka jaridda biyaha inta lagu guda jiro xilli monsoon ee magaalooyinka metro sida Delhi. Warqad ku editor ah oo ku saabsan dhibaatooyinka jaridda biyaha inta lagu guda jiro xilli monsoon 1065/20 Tri Nagar Delhi-110035…